IGPS kwi-Android, iSuperSurv yeyona ndlela iphambili ye-GIS-iGeofumadas
Epreli, 2013 GPS / Izixhobo, Ukuprinta kokuqala, SuperGIS
I-SuperSurv isixhobo esikhuliswe ngokukodwa kwi-GPS e-Android, njengesicelo esidibanisa imisebenzi ye-GIS onokuyifumatha idatha endle ngokufanelekileyo nangokwezoqoqosho.
Inguqu yakutshanje, i-SuperSurv 3 iguqula iselula ibe ngumqokeleli, nge-geolocation, ukubonisa imephu, umbuzo, umlinganiselo kunye nokulandelela umzila.
Kuyathakazelisa ukuba idatha inokugcinwa kwifomathi yefomathi (i-SHP) kunye ne-GEO, eyifomathi yobunini beSupergeo; Sathetha ngeentsuku ezimbalwa ezidlulileyo. Ngemisebenzi yeGPS unokugcina iindlela.
Yintoni enokuyenza nge SuperSurv 3
Ukuqokelela idatha ngokukhawuleza kwinqanaba, umgca kunye neifomati ze-polygon
Bonisa idatha yendawo kwindawo yolawulo lwehlabathi
Yakha uphinde ulawule iindlela
Idatha yokufikelela kwiSpyGIS Server
Qhagamshelana uze ulinganise imephu usebenzisa izixhobo ze-GIS
Bona indawo kunye nekhokelo ngexesha langempela
Sebenzisa imephu engaxhunyiwe kwi-intanethi, kwi-shp, iifomati ze-GEO kunye nolwazi olugcinwe kwifayili yokongezwa kwe-sgt
Sebenzisa ukunyaniseka okwenziweyo ukubonisa izikhundla zendlela
Sebenzisa ii-GPS iimpawu kwi-Android
Ukusetyenziswa kwe-SuperSurv 3
Iingcali zentsimi, zombini ngeenjongo ze-cadastre kunye nezifundo zokusingqongileyo, zinokuthatha ithuba lokufumana ulwazi ngeGPS okanye uzobe simahla kwiscreen. Ungacima, uvule kwaye ukhethe umaleko ukukhetha apho idatha iya kugcinwa khona. Ukuququzelela ukuqokelelwa kwedatha, kuyathakazelisa ukuba uluhlu ngalunye lunokuba netafile eneempawu ezinokuthi zilungelelaniswe nokubhaliweyo, amanani, umhla, ixesha, ulungelelwaniso, njl njl ... ngaphandle kweembuyekezo ezininzi.
Ixhasa ulungelelwaniso lwehlabathi kwifomathi yejografi. Ipropathi ye-E-khampasi ikuvumela ukuba ufumane indawo kwimephu; ukwenzela ukuba abasebenzisi babone iipropathi zangoku kwibar yomgangatho kwaye balandele indlela abahambe ngayo.
Ukongeza, umsebenzi wekhamera yeselula, ngaba yi-smartphone okanye ithebhulethi, ingagcinwa i-georeferenced.
Umboniso wedatha awukho kwiifomathi ze-vector kunye ne-raster kuphela, kodwa nakwiinkonzo ngeenkonzo zeemephu zewebhu. Ukutshintsha phakathi kwedatha yenkonzo enye kunye nezinye ... kuhambele phambili ngokubhekisele ekusebenzeni nasekusebenzeni.
Kwaye okokugqibela, ukwenza lula ukukhohlisa, kuyathakazelisa ukuba xa usenza iprojekthi entsha isebenzisa iimpawu zokugqibela ezisetyenziselwa ukuqhubeka kwimeko enye ngaphandle kokumisela yonke into kwakhona. Olunye uphawu olubonakalayo lokusebenziseka lulawulo lweendlela, ezinokuthi zibekwe ngokulandelelana, kunye nokukhetha ukungafihli nto eqinisekisa ukuba ungabona ngaphezulu komgangatho omnye ngaxeshanye.
Ngamafutshane, i-GPS engcono kwi-Android.
Ixabiso leSu SuperSurv lingakanani?
Ngokuqhelekileyo ilayisenisi i-dollar ye-200, ukuze kuthengiswe imarike yokuthetha iSpanishi i-ZatocaConnect inokunikela ngezaphulelo ezikhethekileyo.
Cela isicatshulwa ngexabiso elikhethekileyo
Post edlulileyo«Ngaphambilini Conference Intelligence Indawo Brazil, wafuna kwanababonisi ukuba
Post Next Indlela yokuxhuma kwi-intanethi kwiindawo ezikudeOkulandelayo »
Iimpendulo ezi-3 kwi "GPS kwi-Android, iSuperSurv yeyona ndlela iphambili ye-GIS"
Kukho ikhonkco lokukhuphela i-software gis
Ndiyifumana into enomdla kakhulu, kodwa andizange ndiyikhuphele kwisayithi ye-supergeo. Ingaba kwenye indawo ??? ???
fabian yanez uthi:
nceda nceda unomxholo othabatha umdla undithumelele iinkcukacha ezininzi